न्यायाधीशको पनि योग्यता जाँच गर्नुपर्छ spacekhabar
न्यायाधीशको पनि योग्यता जाँच गर्नुपर्छ चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बारमा अध्यक्षका उम्मेदवार (प्रगतिशील समूह)
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनको निर्वाचन यही चैत १६ गते हुँदैंछ । निर्वाचनमा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूह आ–आफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रगतिशील समूहको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठले गरेका छन् भने लोकतान्त्रिक समूहलाई सुनीलकुमार पोखरेलले नेतृत्व गरेका छन् । प्रगतिशील प्यानलको नेतृत्व गरेका श्रेष्ठले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा र कानुन व्यवसायीको हक–हितको सुरक्षालाई आफ्नो समूहले मूल एजेण्डा बनाएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ स्पेसखबरले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा र कानुन व्यवसायीको हक–हित सुरक्षित गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । यी कुराका लागि सफल र सबल नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले मेरो उम्मेदवारी यी मुलभूत रुपमा चार कुरामा केन्द्रित रहेको छ । यसका लागि मेरो नेतृत्वमा समूह बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छौं ।
अहिलेको नेतृत्व के तपाईले भनेको जस्तो छैन र ?
अहिले बार त छ, तर हामीले भनेका चार उद्देश्य पूरा गर्न सफल भइराखेको छैन । अहिले तीन वर्षको कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायपरिषद्, भ्रष्टाचार र कानुन व्यवसायीको हक हितको विषयमा बारले प्रतिष्ठा जोगाउन सकेन । कानुनले न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी न्यूनतम योग्यता तोकेको छ । यस्तो योग्यता तोक्दैमा न्यायाधीश हुन पाइँदैन । योग्यता, दक्षता र अनुभव पनि जाँच गर्नु पर्छ । न्यायाधीश हुने व्यक्तिको नैतिक धरातल पनि उच्च हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी हस्तक्षेप गराउनुमा तपाईंहरुको पनि दोष होला नि ?
यदाकदा यस्ता गल्ती भएका छन् । यसमा समूहको दोष छैन । हाम्रो समूहले बारको नेतृत्व गर्दा धेरै राम्रा काम गरेका छन् । बासुदेव ढुंगानाको पालामा हामी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका थियौं । त्यस्तै शम्भु थापा अध्यक्ष भएका बेला नेपाल बारको प्रतिष्ठा उच्च थियो ।
हरिकृष्ण कार्कीको पालामा पनि बारमा समस्या भएन । हो, निर्वाचित हुने बेला कार्कीले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तर राज्यले महान्यायाधिबक्ता जस्तो पदमा उहाँको आवश्यकता देखेर नै लगेको हो । उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो । हामीले यसमा यत्ति मात्र भन्छौं त्यतिबेला अविछिन्न रुपमा बारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा केही गल्ति भएको हो । तर त्यो ठूलो गल्ति होइन । त्यसैले अहिले त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धतासहित मेरो नेतृत्वमा टिम बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छौं ।
मतदाताले विगत दोहोरिन्छ कि भनेर प्रश्न पनि गरेका होलान् नि ?
यसअगाडिको बारको निर्वाचनमा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । त्यसलाई मध्यनजर राख्दै यसपटक २५ कानुन व्यवसायी साथीहरुले व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रतिबद्धता पनि गरेका छौं । यसपटक निर्वाचित हुने कुनै पनि व्यक्ति बारलाई छाडेर अन्यत्र नियुक्ति खानका लागि दौडिँदैन ।
न्यायपालिकामा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको चर्चा छ । यसमा बारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
जब–जब बार सबल र सक्षम हुन्छ त्यतिबेला न्यायपालिकामा कतैबाट हस्तक्षेप भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारमुक्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेका बेला कतैबाट हस्तक्षेप हुँदैन । तर बार कमजोर भयो भने खबरदारी गर्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ र यतिबेला सरकारी हस्तक्षेप बढेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई उच्च सम्मानित अवस्थामा राख्न बारलाई सबल नेतृत्वको आवश्यकता परेको छ । सबल बार बनाउने टिमको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौं । हामी निर्वाचित भएर गएपछि अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरी दोहोरिने छैनन् ।
कुनै राजनीतिक दल विशेषबाट निर्देशित हुन्छ कि नेपाल बार ?
बिलकुलै हुँदैन । मेरो टिमको स्प्रिट के हो भने राजनीति बाहिर गर्नु पर्छ । बारको लागि विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र कानुन ब्यवसायीको हकहित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी मूल गन्तव्य हो । त्यो पुरा गर्न राजनीतिक आस्थाबाट होइन ब्यवसायिक निष्ठाको आधारबाट अघि बढ्ने छौं । हामीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कतै पनि विभेद गर्दैनौं ।
न्यायमा जनताको पहुँच सहज बनाउन बारका तर्फबाट कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त ?
न्याय महँगो भएको छ । अहिलेको संहिता आएपछि न्याय महँगो भयो भनेर हामीहरुबीच पनि चर्चा चलेको छ । न्याय सर्वसुलभ बनाउन हामी आवश्यकता अनुसारको काम गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौं । हिजो जनसंख्याको साढे २ प्रतिशतमा मात्र न्यायमा पहुँच पुगेको थियो । तर नयाँ संविधानमा न्यायमा जनताको पहुँच पु¥याउन न्यायिक समितिको व्यवस्था भएपछि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । तर ती समितिहरुमा कानुन व्यवसायीको सहभागीता निश्चित भएको छैन । त्यसैले ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने मूल मान्यतालाई अंगिकार गर्ने हो भने त्यस्ता समितिहरुमा कानुन व्यवसायीको सहभागीता गराउनु पर्छ । त्यसका लागि हामीले पहल गर्ने छौं ।
बार र बेन्चको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
बार र बेन्चको सम्बन्ध भनेको न्यायिक नेतृत्वबाट राम्रो कामको थालनी हुँदा हामी सधैं सहयोग गर्न तयार छौं । तर गलत काम हुँदा खबरदारी गर्न छाड्दैनौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २७, २०७५, ११:५३:००
‘मलेसियाको रोजगारी एकादेशको कथा हुनसक्छ’
‘दलहरूप्रति विदेशमा बस्ने नेपाली चिढिएका छन्’
विप्लवका विषयमा धेरै सोचेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन : महानिरीक्षक खनाल
‘बुबाले मूलधारमा ल्याए पनि हामी मान्दैनौंं’
कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्छ